Usoro kacha mma nke Parchis STAR | Gam akporosis
Usoro kachasị mma nke Parchis STAR
Onyeka Onwenu | 08/04/2021 08:30 | Egwuregwu gam akporo
A na-echekwa egwuregwu bọọlụ dị ka egwuregwu ekele maka eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ mmadụ nwere ike isonye. Onye ọ bụla n’ime ha nwere iwu nke ya, nke dị mkpa iji nwee ike igwu egwu dịka ndị otu egwuregwu ndị ọzọ mejupụtara egwuregwu ahụ, ma ọ bụ na kaadị kaadị ma ọ bụ na tebụl tebụl.
Otu egwuregwu vidio nke na-ewu ewu na nso nso a bụ Parchis STAR, aha a ma ama sitere na Storelọ Ahịa Play nwere ihe karịrị nde 50. Ọ bụ ngwa iji soro ndị ezinụlọ, ndị enyi na ndị si n'akụkụ ọzọ nke ụwa nọrịa oge.
Ọ bụ aha iji kpọọ Parcheesi na ngụkọta nke taịlị anọ, ejiri ya daịlị tụgharịa site na 1 ruo 6 onye na-abịarute ya na taịl nile ahụ n’ụlọ n’etiti bọọdụ ga-emeri. Iji mee nke a, ọ ghaghị ịzọ ndị iro ya, nke na nke a nwere ike ịdị iche na-adabere na egwuregwu ahụ.
1 Nweta mkpụrụ ego
2 Nweta mkpụrụ ego na-enweghị ngwụcha
3 Hichapụ onye ọrụ ọbịa ma mepụta ọzọ
4 Nwee mmeri na Parchis Star mgbe niile
5 Etu ị ga-esi nweta pealu na Parchis Star
6 Esi nweta ihe bara nnukwu uru
7 Free bara nnukwu uru na-akwalite Parchis Star
8 Ọkwa elu na Booster
Nweta mkpụrụ ego
Ilele Mgbasa ozi esighi na: Na Parchis Star ọ ga - ekwe omume ị nweta mkpụrụ ego, iji nweta ụfọdụ ọ kachasị mma ịnwe ike ịhụ ọkwa ụbọchị niile, opekata mpe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe opekata mpe ihe ndị bụ isi. Iji mee nke a, pịa etiti n’elu aka ekpe, enwere ụfọdụ ọrụ ị ga-arụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ụdị mkpụrụ ego a. Vidio ndị ahụ na-adịkarị ihe dị ka sekọnd 30 ogologo ma ị nwere ike ilele ruo 5-6 sekọnd ma ụgwọ ọrụ bụ mkpụrụ ego ọla edo 250, 300, 350 na 500.
Imeri egwuregwu: Ọ bụrụ na ị na-emeri egwuregwu ugboro ugboro na Parchis Star Nke a agaghị abụ ụdị nsogbu ọ bụla, yabụ ị ga-enweta ọtụtụ mkpụrụ ego. Ọ bụrụ na ịnweghị ibe, ọ ga-abụ na ị gaghị enwe ike igwu egwuregwu, yabụ ị nwere ike ịga lelee mgbasa ozi.
Gwuo na Njikọ: Otu n'ime ihe ndị achọrọ iji nwee ike ịlụ na Njikọ bụ ka ọ dịkarịa ala ọkwa 4, site na Bronze League ị ga-enwe ike ịbanye na Titan League ma ọ bụrụ na ị dị mma. Mkpụrụ ego ndị ị na-emeri dị ọtụtụ ma ị gaghị agba nke ọ bụla ịsọ mpi n'asọmpi a na-ekesa ha mgbe niile.
Nweta mkpụrụ ego na-enweghị ngwụcha
Otu n'ime nti aghụghọ n'ihi na Parchis Star dị na iji ngwa akpọrọ Parallel Space, amaara maka ngwa oyiri, ejiri ya jiri akaụntụ Twitter abụọ, Facebook, wdg. A ga-eji ya nyefee mkpụrụ ego, n'etiti usoro aghụghọ ndị ọzọ maka Parchis Star, ebe ọ bụ ọrụ dị mfe iji. Ọ dị mkpa iji ụdị 64-bit, ụdị 32-bit agaghị arụ ọrụ na ngwa ahụ.
Iji mee nke a, wụnye Oghere yiri ya, nye ikikere dị iche iche, họrọ ngwa iji mepụta, na ajụjụ Parchis Star, nke bụ ihe masịrị anyị, Pịa na "+" na n'ikpeazụ họrọ ngwa. Malite Parchis Star na Parallel Space, Space Parallel ga-arịọ gị ka ibudata ụdị 64-bit, nabata ma nyekwa ikikere niile ọzọ.
Na Parchis Star mmepụta oyiri nke Ndekota Star ị ga-egwu dị ka ọbịa, ejirila akaụntụ nkịtị gị nwee ike ịghara ịhụ ma ghara ịdọrọ uche. Pịa na egwuregwu egwuregwu, mepụta egwuregwu ọhụrụ site na ịpị akara ngosi etiti ma dee nọmba ga-egosi gị, na ọnụ ọgụgụ ị nwere ike ịkpọ ndị ọzọ, ma ọ bụ naanị gị igwu egwu na akaụntụ a.
Ugbu a wedata Parallel Space iji mepee ngwa Parchis Star site na desktọpụ gị, pịa ndị egwuregwu na ndị enyi wee dee ọnụ ọgụgụ egwuregwu ịdekọtara. Ozugbo ị banyere, ị ga-jikọọ na egwuregwu, emeghe Ndekota Space ọzọ, ị ga-ahụ na profaịlụ nke ekwentị gị adịlarị na egwuregwu ahụ, jiri akaụntụ ndị ọbịa tụgharịa, mgbe emere nke a pịa «Azụ» ịhapụ egwuregwu ahụ, na-egosi ozi na ị ga-atụfu mkpụrụ ego nzọ, mana ya a na-achọgharị, na-enye otu ihe ahụ na akaụntụ gị bụ otu.
Ugbu a, gị na ekwentị mkpanaaka na akaụntụ ị ga-amanye tụgharịa na dais, mee ya ọ ga - egosi gị ozi na ị bụ onye mmeri nke egwuregwu ahụ. Ihe dị mma bụ na ị ga-enweta ego nke mkpụrụ ego 500, ebe ọ bụ na anaghị agụta mkpụrụ ego 500 gị, mana ị gaghị efu ha mgbe ị na-egwuri egwu na ọbịa gị onwe gị mepụtara.
Space Parallel - Akaụntụ Multi
Hichapụ onye ọrụ ọbịa ma mepụta ọzọ
A ọrụ anyị ga-eme ka ngwa ahụ ghara ịmata na anyị agaghị ahapụ ihe ngosi ọ bụla, n'ihi na nke a ihe niile na-eme ihichapu data nke Parallel Space. Ọ bụ aghụghọ dị oke ọnụ ma baa uru ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe mkpụrụ ego na-enweghị ngwụcha, ebe ọ bụ ọrụ na-ewe obere oge.
Iji mee nke a, nwee ndidi ma mezuo usoro ọzọ iji mepụta onye ọrụ ọbịa ọzọ nke ga-efufu ma nye isi ihe na akaụntụ ahụ. Parchis Star na-enye gị ohere igwu egwu na akaụntụ ndị ọbịa ma ọ bụ jiri akaụntụ mepụtara, ị nwere ike iji akaụntụ Facebook ma ọ bụ ozi-e na paswọọdụ.
Nzọụkwụ ndị a bụ:
Nweta Ntọala nke ekwentị gị
Chọọ "Ngwa", pịa ya ma chọta Ndekota Ohere, pịa
Ugbu a na Nchekwa, pịa na "Clear cache data" na ngwa data
Nke a ga - eme gị hichapụ usoro ọ bụla nke onye ọrụ ahụ mepụtara dị ka “Ọbịa”
Enwere ike imeghachi ya ugboro ole ị chọrọ, yabụ ị ga - emeri mkpụrụ ego narị ise maka egwuregwu ọ bụla egwuru egwu. Mkpụrụ ego dị oké mkpa iji kpọọ na Parchis Star, yabụ inwe ọtụtụ puku na puku, ị ga-eso ndị enyi gị gwuo egwuregwu na-enweghị ịhụ mgbasa ozi ma ọ bụ merie egwuregwu mgbe niile.
Nwee mmeri na Parchis Star mgbe niile
Na-echeta mgbe nile ebe ị na-aga ịkwaga taịl nile ahụ ma hụ mgbe ọ bụla i nwere ike, ha niile n’enweghị ihe egwu ọ bụla megide ndị na-agba ya mgba. Iri mgba nke onye mmegide ọ ka mma ịnwe ọnụ ọgụgụ dị elu, ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ, ị ga-enwe ọtụtụ mmegharị ịghara ibu onye ọ bụla ụzọ.
Gbalịa mgbe niile inwe otu akara aka ọzọ na oge ụfọdụỌ bụ ezie na ị na-ekiri mgbe niile na onye iro ọzọ erughị ebe ahụ iji gbuo ma ọ dịkarịa ala otu n’ime ha, kpuchie azụ gị nke ọma. Nwee ma ọ dịkarịa ala ibe abụọ na igbe nchekwa, chere ka onye mmegide gafere ma ọ bụrụ na ịnwee ohere, rie ya.
Ọ bụrụ na ị na-egwuri egwu dị ka otu ndị ọzọ na mbụ ibe hụ na otu onye n'ime ha ruru ihe mgbaru ọsọ, ihe kachasị mma na Parchis Star bụ iri mkpụrụ niile iji nwee ọganihu. Ozugbo mmadu rutere, nke ozo ga-enwe mmeghari abuo na mpịakọta nke otu na nke ọzọ, yabụ ọganihu ga-adị ọsịsọ. N'iji pearl ị nwere ike ịgbanwe otu n'ime obere ọsọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnweta 1 ma ọ bụ 2.
Etu ị ga-esi nweta pealu na Parchis Star
Otu n’ime ihe ga-eme ka anyị nwee ihe karịrị otu ọsọ bụ inweta pear (amara dị ka bara nnukwu uru), ha na-enweta site na-eziga ndị ib. (bara nnukwu uru) ka gị Facebook enyi na-ekiri vidio nke ngwa. Site na pearl ị nwekwara ike nweta ngwa, gụnyere dais nke ụdị ọzọ, akara ngosi ahaziri iche, na ihe ndị ọzọ.
Na skins ị nwere otu ihe mkpali iji nọgide na-enye Parchis Star ọhụụ ọhụrụ ka ọ ghara ikwughachi ya, yabụ ọ dị mma maka ndị egwuregwu ahụ etinyela ya ogologo oge ma ọ bụ ndị bịara ọhụụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhọrọ egwuregwu ọhụụ nke dice ma ọ bụ akara ngosi, gaa na nchịkọta nhọrọ.
Esi nweta ihe bara nnukwu uru
Na-ekere òkè na Njikọ ahụ: Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta Gems, ihe ị ga - eme bụ isonye na Njikọ ahụ, nhọrọ ị ga - eme ga - adị iche, ebe ọ ga - ekwe omume igwu dị iche iche. Njikọ Bronze n'agbanyeghị na ọ gbagwojuru anya, ọ ga-abụ iwu na ịnọ na ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji merie a ọtụtụ bara nnukwu uru.
Ụgwọ: Na bọtịnụ na-esote bara nnukwu uru ị ga-ahụ onyinye nrite. Nyefee lido ma merie ihe nrite na-atọ ụtọ, gbakwunyere ndị enyi gị nwere ike iziga gị daị. Onyinye a dị mma ma na-eje ozi iji nweta ọtụtụ ihe bara nnukwu uru, nke ga-agbakọta ọtụtụ na njedebe nke ụbọchị ma ọ bụrụ na ị na-egwukarị opekata mpe ọtụtụ egwuregwu kwa ụbọchị.
Free bara nnukwu uru na-akwalite Parchis Star
Otu n'ime ihe ị ga - enweta bara nnukwu uru na Parchis Star bụ ịkwalite egwuregwu vidio gam akporo na Facebook, maka nke a, ị ga-enweta ihe nrite na-adọrọ mmasị, gụnyere ihe bara nnukwu uru. Maka nke a ndị enyi gị ga-ezitere gị dice, ị nwekwara ike izipu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụrụ na ha gwuo Parchis Star.
Emecha egwuregwu na Parchis Star ị ga - enweta ọtụtụ narị bara nnukwu uru, maka nke a, ị ga - emerịrị ya maka oge ọ bụla nke egwuregwu ga - adị. A na-ewere Bronze League dị ka asọmpi asọmpi, ma ọ bụghị nke dị mgbagwoju anya, ebe ị nwere ike ịsọ mpi na ndị mmegide ndị ọzọ.
Ọkwa elu na Booster
Otu ụzọ ị ga-esi gbagoo ngwa ngwa bụ site na iji Booster, otu akụkụ nke egwuregwu ahụ nke enwetara dị ka ụgwọ ọrụ ma ọ bụ enwere ike zụta n'ime egwuregwu ahụ. Ọrụ bụ isi bụ na ị ga-enwe ike ịga n'ihu n'ụzọ zuru oke, Parchis Star bụ onye iwu zuru oke.
Iji nweta abamuru zuru oke nke Booster, ọ kachasị mma ịrara oge dị ukwuu ozugbo ị megharịrị ya, ebe ọ nwere oge echere. Booster ga - eme gị ọfụma n’oge ị nwetara ya, ya mere odi nkpa maka ndi bidoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Usoro kachasị mma nke Parchis STAR